Wed, 2019-09-25 13:00
၁။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များအတွက် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော Data Center Colocation Service ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုရယူ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် အနိမ့်ဆုံး Tier3အဆင့်ရှိ Data Center Colocation Service ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေသူများအနေဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားပါက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ/ အဖွဲ့အစည်း၏ တာဝန်ရှိသူ ကိုယ်တိုင် (သို့မဟုတ်) ကိုယ်စား လက်မှတ်ရေးထိုး၍ Expression of Interest (EOI) တင်သွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
Wed, 2019-08-28 10:00
ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော စက်မောင်းဆီ(ဒီဇယ်ဆီ) များနှင့် ကမ်းရိုးတန်းဒေသသုံး “Landing Craft” ရေယာဉ်သစ် တည်ဆောက်ရေးတွင် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သာမန်/ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ် (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် ဝယ်ယူရန် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာ ခေါ်ယူခြင်း
Published: Aug 06
Wed, 2019-09-18 14:00
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has receivedaloan from Japan International Cooperation Agency (JICA) towards the cost of the Yangon Mandalay Railway Improvement Project Phase II. The Bid is invited by Myanma Railways.
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
Published: Jul 12
Mon, 2019-08-12 16:30
တင်ဒါအမှတ်စဉ် (ITCSD - ၁၂ / ၂၀၁၉)
ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော ရေကြောင်းသုံးအထောက်အကူပြုပစ္စည်း (၄)မျိုးကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာ ခေါ်ယူခြင်း
Thu, 2019-07-25 10:00
Tender Notice 10-7-2019.jpg
Request for Quotation (RFQ) for the “.mm” ccTLD
Published: Jun 20
Wed, 2019-07-10 13:00
.mm Domain Name Management System စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်းအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
mm Domain Tender.pdf
2019-06-20 .mm RFQ.pdf
2019-06-20 Conformity to the Electronic Addressing Plan(PDF verision).pdf
2019-06-20 Conformity to the ICANN Registry Agreement(PDF version).pdf
လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
Thu, 2019-06-27 16:30
၁။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး၀န်ကြီးဌာန၊ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန၏၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဖလမ်း (ဆူရ်ဘုန်) လေဆိပ်သစ်တွင် အသုံးပြုရန် အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ စက်ပစ္စည်းများနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများအား (မြန်မာကျပ်ငွေ) များဖြင့် ၀ယ်ယူလိုပါ၍ အိတ်ဖွင့် တင်ဒါများပေးသွင်း ရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
ဖလမ်းလေဆိပ် လေယာဉ်‌ပြေးလမ်းတွင် တပ်ဆင်မည့် Airfield Lighting ဝယ်ယူခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း
Airfield Lighting Power Cable များနှင့် Communication Cable များ တပ်ဆင်ရန် လေယာဉ်ပြေးလမ်းဘေးတွင် Underground Main Cable Duct Line တည်ဆောက်ခြင်း၊ (Pipe Line တူးခြင်း၊ Pipe ချခြင်း၊မြေဖို့ ခြင်း၊ သဲဖို့ခြင်း၊ Counterpoise ချခြင်း၊ Earth Rod ရိုက်ခြင်း၊ Manhole များတည်ဆောက်ခြင်း၊ Handhole များတည်ဆောက်ခြင်း)
DVOR/DME (Doppler VHF Omni-directional Radio Range/ Distance Measuring Equipment)
AWOS (Automatic Weather Observation System)
၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစည်းကမ်းနှင့် လျှောက်လွှာပုံစံများအား ၁၄-၆-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ စ၍ ရုံးချိန်အတွင်းရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ၂၇-၆-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် တင်ဒါအရောင်းပိတ်ပြီး ၁၂-၇-၂၀၁၉ ရက်နေ့ (၁၅:၀၀) နာရီအချိန်အတွင်း တင်ဒါများပြန်လည် တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါ အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါက ရုံးချိန်အတွင်း ဖုန်းနံပါတ်၊ ၀၁-၅၃၃၀၀၉၊ ၀၁-၅၃၃၀၃၀ လိုင်းခွဲ-၅၂၁ သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
DCA Tender (13-6-2019).pdf
မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်တွင် အသုံးပြုရန် ဒီဇယ်ဆီ (H.S.D)၊ ပရီမီယမ်ဒီဇယ်ဆီ(P.H.S.D)နှင့် ဓါတ်ဆီ (Octane-92) (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအတွက်) တို့ကို ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
Tue, 2019-06-25 14:00
၁။ ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း၊ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်တွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော ဒီဇယ်ဆီ (H.S.D)၊ ပရီမီယမ်ဒီဇယ်ဆီ(P.H.S.D)နှင့် ဓါတ်ဆီ (Octane-92) (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအတွက်) တို့ကို ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို (၂၅.၆.၂၀၁၉)ရက်နေ့ (၁၄:၀၀)နာရီနောက်ဆုံးထားတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
၂။ တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊ ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာန၊ ကမ်းနားလမ်း(ဗိုလ်တထောင်ဘုရား အနောက်ဖက်၊ ကွန်ကရိလမ်း၊ Toll Gate အနီး)၊ ဆိပ်ကမ်း မြို့နယ်တွင် (၂၄.၅.၂၀၁၉) ရက်နေ့မှစ၍ (၂၄.၆.၂၀၁၉)ရက်နေ့အထိ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ် ရယူနိုင်ပါကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက တယ်လီဖုန်းအမှတ်၊ ၀၁-၈၆၁၀၂၃၀ နှင့် ၀၁-၈၆၁၀၂၃၂ တို့ကို စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
MPA Tender (29-5-2019).pdf